Zinjalo neentlanzi zamanzi abandayo | Ngeentlanzi
Ngokuqinisekileyo uninzi lwethu oluthandayo izilwanyana aluzange ligqibe, ngamanye amaxesha, ukuba nesilwanyana ngenxa yezizathu ezahlukeneyo: ukunqongophala kwexesha lokuzikhathalela, ungazi ukuba loluphi uhlobo onokulukhetha, njl. Isisombululo esihle kuko konke oku zezi intlanzi.
I-aquarium yinto onokukhetha kuyo ukuba sifuna ukonwabela ukuhlala nezi zilwanyana zincinci zingadingi kukhathalelwa kakhulu kwaye zinokusizisela amaxesha amnandi. Banomtsalane kwaye banomtsalane, ngakumbi kwabancinci endlwini.
Kwaye, enyanisweni, kukho iindidi ezininzi ze iintlanzi zamanzi abandayo esinokuzibandakanya njengezilwanyana zasekhaya. Ubungakanani obahlukeneyo, imibala, iimilo, njl.
Okulandelayo, siza kukuxelela okungakumbi malunga nabo kwaye siza kukunika uthotho lweengcebiso ukuze amava akho nezi zinto zikhethekileyo ziqiniseke kangangoko.
1 Iindidi zentlanzi yamanzi abandayo
1.1 IGoldfish (icarassius auratus)
1.2 Inyanga yelanga (Lepomis gibbosus)
1.3 Iintlanzi zeparadesi (iMacropodus opercularis)
1.4 I-koi carp (icyprinus carpio)
1.5 Neon yaseTshayina okanye amanzi abandayo (Tanichthys albonubes)
2 Ungazikhathalela njani iintlanzi zamanzi abandayo
3 Amaxabiso eentlanzi zamanzi abandayo
4 Intlanzi yamanzi ebandayo ye-aquarium
5 Izifo zeentlanzi ezibandayo kunye neengozi
Njengoko besesitshilo, phakathi kweentlanzi zamanzi abandayo sifumana iintlobo ezingapheliyo, nganye nganye ikhethekile. Nangona kunjalo, ezi zinto zithandwa kakhulu:
IGoldfish (icarassius auratus)
IGoldfish, ekwabizwa ngokuba yicarp fish, zezona zixhaphake kakhulu. Babonakaliswa ngokuba nemibala eorenji nebomvu. Zihlala zinobukhulu obahlukeneyo. Kweli qela leentlanzi, sifumana iintlobo ezahlukeneyo:
Ikhaphethi, igolide ikhaphethi okanye intlanzi ebomvu. Ezi ntlanzi zinomzimba omde kakhulu kunye nomsila.
Intlanzi yeteleskopu. Eyona nto iphambili kuyo ngamehlo ayo aqaqambe kakhulu. Zihlala zimnyama.
Pes cometa okanye sarasa. Inomzimba odibeneyo, kunye nomsila omnye omkhulu kunokuba mkhulu. Kukho iintlobo ezimhlophe, kodwa iirandi kunye neeorenji zilawula.
Ukugquma kwentloko kuyenza ibe luphawu. Kukho imibala eliqela, kodwa i-'Red Riding Hood 'yeyona ixhaphakileyo (umzimba omhlophe nentloko ebomvu).
Umsila we veil. Njenge-comet fish, inomsila obalaseleyo. Ukongeza, ine-hump phakathi kwentloko kunye nomva.
Inyanga yelanga (Lepomis gibbosus)
Enye yeentlanzi ze-aquarium ezinzima. Inamabala amancinci e-orenji emzimbeni wayo wonke. Umlingiswa wakhe unobundlobongela xa ehlala nezinye iintlanzi.
Iintlanzi zeparadesi (iMacropodus opercularis)
Enye yeentlanzi zamanzi abandayo ezimibalabala. Ewe kunjalo, yindawo ekuyo, eyenza kube nzima kakhulu ukubeka amadoda amabini kwindawo enye ye-aquarium ngaphandle kwengxaki ezivela.
I-koi carp (icyprinus carpio)
Kuzo zonke iintlanzi zasemanzini, yeyona ixhaphakileyo. Yombala ubomvu, mhlophe, tyheli, luhlaza, njl, yenye yezona zikhethwe kubo bonke abo bakhetha ukwenza ichibi.
Neon yaseTshayina okanye amanzi abandayo (Tanichthys albonubes)
Bancinci kakhulu ngobukhulu, kodwa uphawu lwabo oluphambili ngumbala oqaqambileyo, olinganisa izibane ze-neon. Kuqhelekile ukubafumana kumaziko akhethekileyo ekuthengisweni kwezilwanyana zasekhaya, kuba zezinye zezona zifunwa kakhulu ngabathandi be-aquarium.
Ungazikhathalela njani iintlanzi zamanzi abandayo
Kufuneka kuqatshelwe ukuba kuyinyani ukuba iintlanzi zamanzi abandayo azidingi kukhathalelwa okugqithisileyo ukuze zisinde, nangona kunjalo, le yinto enesihlobo. Ukuqinisekisa ubomi obulungileyo bezilwanyana, kufuneka sithathele ingqalelo uluhlu lwezinto.
Akumangalisi ukubona abantu abagcina ezi ntlanzi kwiitanki ezincinci nakwiindawo ezinamanzi. Ngokucacileyo, le ayisiyiyo eyona ilungileyo, njengoko bekhetha iindawo ezinkulu.
Amanzi apho benza khona imisebenzi yabo kufuneka babeneqondo lobushushu kufutshane no 18ºC kunye ne pH esisiseko, phakathi ko 6,5 kunye no 7,5.
Ngokubhekisele ekutyeni, abakhethi kakhulu, ke ngoko ukubondla akubonisi bunzima. Ngeemveliso esinokuzithenga nakweliphi na iziko elithile, siya kukuqinisekisa ukondla okuchanekileyo. Nangona unokuncedisa ukutya kwakho ngamaqhekeza amancinci esonka kunye nezinto ezityiwayo zokutya, kodwa ulumkele le yokugqibela, kuba ezinye iingcali zicebisa ukuba kulungile ngelixa abanye bethetha okwahlukileyo.
Kufuneka sizondle malunga namaxesha ama-2-3 ngosuku, kunye nokutya okuncinci. Iintlanzi zamanzi abandayo zinokutya okungadliyo.
Zizilwanyana ezinomdla kakhulu, ke izinto zokuhombisa emanzini zilungele zona.
Amaxabiso eentlanzi zamanzi abandayo
Njengazo zonke izilwanyana zasekhaya, kuxhomekeke kuhlobo okanye udidi, iya kuba nexabiso elinye okanye elinye.
Iintlanzi ezinamanzi abandayo ngokubanzi azibizi kakhulu. Sineentlanzi zekite I-2 euros, nangona ke sinabanye abanjengo Oranda enexabiso eliphezulu (ngaphezulu kwe- 10 euro).
Intlanzi yamanzi ebandayo ye-aquarium
Xa useta i-aquarium yethu, esona sigqibo sinzima sihlala sihlala kwezi ntlobo zeentlanzi. Akukho sidingo sothuswa koku.
Kuzo zonke iintlobo zamanzi abandayo, ezona zicetyiswayo kwi-aquarium zezi Goldfish y Intsha yaseTshayina, esele sithethe ngazo kumacandelo angaphambili.
Ikwayindlela elungileyo kakhulu eyaziwa njenge UBetta uyakhazimla, ezihlala zihlelwa njengeentlanzi zetropiki kodwa ziqhelana kakuhle nobomi emanzini abandayo. Eyona nto iphambili kubo kukuba banoburhalarhume. Nangona kunjalo, ngokuthanda kwabo kufuneka kuthiwe bazala ngokulula.
Okokugqibela, i Intlanzi yeteleskopu, enemibala emihle kunye namehlo amdaka. Ukunyamekela kwayo kulula kakhulu.
Izifo zeentlanzi ezibandayo kunye neengozi
Iintlanzi zamanzi abandayo zinokuchaphazeleka zizifo ezahlukeneyo kunye nezinto ezinokubangela ukufa kwazo.
Ukuba sibona ukuba iintlanzi zethu ziyadada rhoqo kwindawo ephezulu zikhangela umphezulu, kungenxa yokuba kukho ioksijini encinci enyibilikileyo emanzini kwaye oku kunokubangela. ukufuthanisela.
Utshintsho ngesiquphe kubushushu ziyonakalisa kakhulu. Ukuthintela oku, kufuneka uqinisekise ukuba iqondo lobushushu lihlala lizinzile kwaye ungabeki i-aquarium kufutshane nendawo egcwele uyilo.
Enye imeko ekufuneka ithathelwe ingqalelo yile iklorini esemanzini, ezinokuthi zitshintshe i-pH kwaye zibangele, phakathi kwezinye izinto ezininzi, ukuba iigilizi kunye nomphezulu womzimba wentlanzi uyatshatyalaliswa.
Phakathi kwezifo eziqhelekileyo siqaqambisa ukuqhina (kubangelwa kukutya okungalunganga kakhulu), intsholongwane kunye neentsholongwane, necrosis (izibonakalisa ngohlobo lokuba novalo kwisilwanyana, ianemia, isisu esiswini, njalo njalo) ukubola (Sesinye sezona zilonda zolusu ziqhelekileyo kwaye sizibonakalisa njengomgca omhlophe emaphethelweni amaphiko asasazekayo).
Sinokubandakanya nezinye izifo ezinje nge isifo sephepha, ingqakaqha, isikhunta, njl..
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Iintlanzi zamanzi abandayo
UOmar Ceballos Zapata sitsho
I-Bettas ayivumelani namanzi abandayo, ngokuchaseneyo, badinga amanzi kumaqondo okushisa angama-26 ukuya kuma-28 ama-degrees Celsius, ngokukhethekileyo kunye nokuzaliswa kwabo kunzima, kufuna ukunakekelwa okukhulu nokuzinikezela, ngaphezu kwamanzi afudumeleyo kunye nohlaza oluninzi.
Phendula uOmar Ceballos Zapata